Budata Hi Speed Booster APK maka Android
Budata Hi Speed Booster
Free Budata maka Android (0.97 MB)
Budata Hi Speed Booster,
Hi Speed ​​​​Booster bụ nrụzi sistemu, njikarịcha na ngwa ihicha nke ị nwere ike iji hichaa ebe nchekwa ngwaọrụ gị. Nihi ngwa a, nke ị nwere ike iji na smartphones ma ọ bụ mbadamba ihe nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo, ị nwere ike ịrụ ọrụ nhazi na ihicha ngwaọrụ gị ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu na ọsọ nke smart ngwaọrụ gị, a na m akwado ka ị nwaa ya.
Njirimara ngwaike nke smartphones ma ọ bụ mbadamba ihe na-eji sistemụ arụ ọrụ gam akporo na-abawanye kwa ụbọchị. Nịtụle ọganihu a na-adịghị akwụsị akwụsị nke nyiwe mkpanaka, anyị nwere ike ịsị na ngwaọrụ ndị anyị zụrụ na-aka nká ozugbo. Ọnọdụ a ewetala anyị nrụzi sistemu yana ngwa kachasị mma. Otu nime ngwa dị na ụdị a, nke abawanyela na nso nso a, Hi Speed ​​​​Booster pụtara na nha ya dị naanị 1 MB ma na-eme ngwa ngwa ngwa ngwa gị. Ka anyị lebakwuo anya nihe bụ isi nke ngwa a, nke na-enyekwara aka nichekwa batrị.
Super osooso (ebe nchekwa na-ahapụ)
Ọsọ ọsọ nke otu mmetụ
Ozi ojiji ebe nchekwa dị elu
Ndepụta ọcha maka ngwa achọghị
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ dị mfe netiti ụdị ngwa ndị a, ị nwere ike budata Hi Speed ​​​​Booster nefu. Ana m akwado gị ịnwale ya.
Hi Speed Booster Ụdịdị
Nha faịlụ: 0.97 MB